Ixesha iimpukane, bengazi ukuba unikezelo - China Yinzhou Nuoya
Eziphathekayo Block Machine
Ixesha iimpukane, bengazi ukuba unikezelo
Ixesha iimpukane, bengazi ukuba ukunikezelwa. ixesha lethu kwezidingo iintsuku ezingama-20, ngokuhambelana neemfuno isivumelwano, ngokubonakalayo ukuzalisekisa ngokwemvumelwano, ukunikezelwa ngokukhawuleza kwaye ngexesha kumthengi.
Ngosuku ngaphambili, siya kuba sikulungele kusasa, amalungiselelo sele ulihlawulele isiqingatha lori, ingxelo kakuhle ixesha iyalayisha, inkosi inqwelo kwakhona babesiza kuye kwakusasa mveliso, ukunceda ukulayisha. ngokuthe ngcembe Yongcheng imozulu wajika shushu, abantu uyakuhlala ucinga, ngoko abapheki ndixakekile kufuneka ukubila ebunzi, kusale nje ihempe enye ingubo yakhe. Apha, ndithi kuni wasebenza nzima.
Iifoto zilandelayo ngexesha ngenxa yokuba ixesha ikhamera hayi kuzakucwangcisa yoko, hayi indlela yesazisi iphosakeleyo Oh!
Okokuqala, kufuneka sijongane nayo ke equmbile intloko lokuxhuba enkulu kangaka dili akulunganga oko, umzamo omkhulu unako ukubeka kwindawo efanelekileyo.
Truck waluvala ucango, esingise khona. Xa ukuba kude, kwakhona uNowa iingcambu. Mhle Hangzhou, i Lake ezintle. UNowa ndinqwenela ukuba West Lake, nalitye ngabantu ukuzisa ezintle yesikhumba Lake.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano zezi zilandelayo:
* Prince: Nceda ukhethe Plane
ixesha Post: Jun-03-2017
E-Idilesi 84, Gaoqiao West Road, Jiangnan Industrial Zone, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
* Prince: Nceda ukhethe Star